Nhabvu yenhabvu inotanga. Ngativerenge nezvazvo futi, handiti? | Zvazvino Zvinyorwa
Nhabvu yenhabvu inotanga. Ngativerenge nezvazvo futi, handiti?
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vechidiki Mabhuku, Novela, Nhema nhema
Nhabvu yenhabvu inotanga zvekare. Zvekare mwaka uzere nekuchiva, kukunda, kukundwa, matambudziko, pichichis, zvibodzwa uye zvibodzwa, makwikwi uye dzimwe pfungwa dzezvose zvakasikwa zvemutambo wakanaka. Fans kana kwete, munhu wese anonzwisisa nhabvu pane imwe nguva uye, chokwadika, timu yedu ndiyo yakanyanya kunaka. Asi, kudarika zvinyorwa zveSvondo nezvinyorwa chiuru chatichaverenga, kune mamwewo mabhuku zvakanyorwa nezvake. Izvo zviripo uye zvakawanda. Izvi ndizvo chaizvo 6 vavo. Kune vese vateereri.
1 Iwo maNhabvu chaiwo - Chakavanzika chevapepeti vakarara - Roberto Santiago
2 Zviroto timu - Mario Torrecillas naArtur Laperia
3 Mwari akatenderera - Juan Villoro
4 Fivha mune ma bleachers - Nick Hornby
5 Ruzha rwemberi - David Gistau
6 Nguva Yemusika - Philip Kerr
Iyo chaiyo nhabvu - Chakavanzika chevapereti vakarara - Roberto Santiago
El zita rekutanga mune dzino dzakateedzana, chimwe chebudiriro kwazvo kune vadiki vaverengi pakati 10 uye 12 makore. Inoratidzwa naEnrique Lorenzo Díaz.
Francisco tamba muchikwata chenhabvu high grove, iyo inofamba munzvimbo dzekupedzisira dzeligi. Kwangosara mitambo mitatu chete uye vanofanirwa kuhwina mumwe nekuti zvikasadaro, vachadzikiswa uye timu ingazonyangarika. Asi pavanokunda mumutambo wekutanga, pakarepo muridzi wepembe anorara uye chinotsiva chinopinda izvo zvinoita kuti varasikirwe. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika mumutambo wechipiri, kunyangwe panguva ino vakasunga. Chekupedzisira, mune chechitatu, zvichaonekwa kuti ndiani ari kumashure kwezviratidziro zvisina kujairika zvekurota.
Kurota timu - Mario Torrecillas naArtur Laperia
Rimwe zita remudiki, panguva ino a comic. Nyora Mario Torrecillas chinobata mufananidzo uye anoenzanisira Arthur Laperla.
Enzo mukomana wemuvakidzani ane shungu dzebhora. Vabereki vake vakaparadzaniswa uye kunyangwe amai vake vakwanisa kuvakazve hupenyu hwavo, baba vake idambudziko. Imwai, zvine mhirizhonga ... Asi Enzo ane bhora revhavha rekutiza uye zvakanaka futi, zvekuti rimwe zuva a Arsenal scout uye anomucherekedza. Iwe uchaisaina here?
Mwari akapoterera - Juan Villoro
Uyu munyori weMexico anonyora a nhoroondo huru yechitendero chenyika icho chinofungidzirwa nhabvu kwezviuru zvevateveri vanozadza nhandare. Zvanga zviri nhume yakakosha mumakombe epasirose muItaly 90 neFrance 98 uye inobata zvese manyorerwo ekunyora pasi penzvimbo yemunda uye neinoratidza toni. Iri zita remutero kuna vanogona kunge vachizivikanwa mwari wenhabvu, MaradonaAnotaura zvakare nezve kubwinya uye kuwedzeredza kwesangano reSpain kana kutsanangura kuti iyo yekupedzisira World Cup yezana ramakore rechiXNUMX yakanga yakaita sei.
Fivha mumasitendi - Nick Hornby
Inofungidzirwa bhuku rakanakisa renhabvu rakambonyorwa, yakarongwa Hornby pakati pevanyori veChirungu vaitungamira vezera rake. Nekufamba kwenguva, uyezve, zvakaitwa chitendero zvese zvevateveri venhabvu uye zvemuverengi mukuru. Yakatengesa anopfuura mamirioni emakopi muUK uye ine mafirimu maviri. Kune Hornby, nhabvu inoreva nzira yakazara yekuona uye kuve munyika. Uye bhuku iri nhoroondo yehupenyu hwake hwehukama hwehukama naye uye nechikwata chake, iyo zvombo kubva kuLondon
Ruzha rwemashure - David Gistau
Dare renhau remutori wenhau uye rakanyorwar, muhombe wemitambo fan. Anotaura nyaya ya Eduardo Barcena, mutori wenhau akabudirira kwazvo anoita kunge anazvo zvese: musikana mukurusa, basa rakanakisa, uye zvipo zvakawanda. Asi chokwadi chine hukama ne Ultra Maodzanyemba, kwaakange ari makore apfuura, achamudzosera kune yake yakashata yapfuura iyo yaagara achiedza kuvanza.
Musika wechando - Firipi Kerr
Kerr, zvinosuruvarisa akashaya gore rapfuura, akamisa chisikwa chake chakakurumbira, mutikitivha wechiGerman Bernie Gunther, kune iri zita uye rimwe, Nhema pfumbamwe, yakatsaurirwa kune nyika yenhabvu. Asi akaramba achisiya chitambi chake chinonakidza.
Iye protagonist ndiye Scott Manson, London City mutevedzeri maneja, timu yeChirungu yeligi. Iye anokwezva, vatambi vake vanomunamata, asi zvakare vezvenhau uye bhodhi, uye anoziva ese ins uye kunze kwemutambo, mukati nekunze kwenhandare. Asi rimwe zuva iyo technical director wechikwata anoita kunge akaurayiwa munhandare. Uye zvese zvinoratidza kuti zvakabatana nemari hombe yemari, chinodiwa chemakwikwi epamusoro emitambo uye zvimwe zvinoshura. Manson achaedza kutsvaga mhondi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Nhabvu yenhabvu inotanga. Ngativerenge nezvazvo futi, handiti?
Mabhuku: Mutambo Wechigaro